Dhammaan wixii ku saabsan barta wararka ee iPhone | Warka IPhone (Bogga 2)
Apple waxay xaqiijisay dhacdadii bandhigga iPhone 13 ee Sebtember 14 ee soo socota laga bilaabo 19:00 fiidnimo.
Toddobaadkan caanku wuxuu ahaa Apple Watch soo socda, oo leh naqshad cusub iyo shaashad dheeri ah, marka lagu daro wararka kale.
Podcast -ka iPhone -ka ee Actualidad ayaa dib u falanqeynaya wax walba oo dhacay xagaagan: xanta ku saabsan iPhone 13, iwm.
Cusboonaysiinta ku socota iOS 14.6 iyo beta-ka iOS 15 waxay dhibaato ku keenaysaa qaar ka mid ah HomePods, iyaga oo ka dhigaya kuwo aan la isticmaali karin.
Toddobaad ka dib tijaabinta Apple Betas waxaan kuu sheegeynaa dareenkayagii ugu horreeyay, iyo wararka kale ee usbuuca.
Ka dib soo bandhigida nidaamyada cusub ee Apple, waxaan falanqeyneynaa wax kasta oo lagu dhawaaqay iyo waxa naga maqnaa.
Podcast 12 × 33: Waxa aan ka sugeyno WWDC 2021
Podcast-ka toddobaadkan waxaan ku falanqeyneynaa waxa aan ku arki karno cusbooneysiinta soo socota ee Apple ay ku soo bandhigi doonto WWDC 2021
IPad Pro 2021 wuxuu qaatay boodbooyin xagga tayada ah marka loo eego dhanka qalabka ee u qalma in lala barbar dhigo wax u dhigma barnaamijka softiweerka
TikTok loogu talagalay macruufka waa la cusbooneysiiyay si laguu oggolaado inaad ka tirtirto faallooyinka fiidiyowyadaada
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee barnaamijka TikTok waxaa ku jira hawl cusub oo kuu oggolaanaysa inaad wada tirtirto ilaa 100 faallooyin
Podcast 12 × 30: Tufaaxa, konsolloolka iyo ciyaaraha fiidiyowga
Waxaan ka hadleynaa suurtagalnimada in Apple ay bilaawdo konsole ciyaarta, waa wax soo dhowaan kara haddii aan iska indhatirno wararka xanta ah ee ugu dambeeyay.
Konsol-ka Apple-ka ayaa ah wax ku soo dhex jiray warar xan ah sannado badan haddana hadda ayay ku soo noqotay goobta
12 × 29 Podcast: Khibrad AirTag iyo Inbadan
Maalmo yar ka dib AirTags, waxaan ka wada hadalnay wixii aan kala kulannay. Waxaan sidoo kale ka hadlaynaa warar kale toddobaadkan sida ...
Podcast 12 × 28: Cusbooneysiinta iyo wararka kale
Toddobaad kadib waxaan falanqeynay dhammaan waxyaabihii looga bartay wararka Apple ee aan lagu xusin munaasabadooda.
Waxaan falanqeyneynaa dhacdada Apple ee lagu soo bandhigay iPad Pro cusub, iMac oo leh processor M1, AirTag, iwm.
Waxaan falanqeyneynaa wax kasta oo aan ku arki karno dhacdada ay Apple xaqiijisay bisha Abriil ee soo socota 20, 2021
Toddobaadkan waxaan falanqeyneynaa jabsigii Facebook iyo ka tagitaankii qeybta moobiilka ee LG oo waligeen naga tagi doona
Apple waxay soo saartay taariikhaha shirweynaha horumarinta ee WWDC 2021, laga bilaabo Juun 7
12 × 23 Podcast: Nabadeey HomePod, maxaa na sugaya?
Apple waxay qortay homePod-kii asalka ahaa, si ay diiradda u saarto HomePod Mini, taasi micnaheedu maahan inaysan jiri doonin kuwa hadlaa?
Podcast 12 × 22: Waxay ku xiran tahay iPad-ka
Toddobaadkan barmaamijkeenna 'podcast' waxaan uga hadlaynaa dhacdada xigta ee laga yaabo inay Apple ku yeelato dhammaadka Maarso soo bandhigida iPad-yada cusub.
Apple waxay u soosaartaa Podcasts cusub kuwa yaryar ee qoyska ka tirsan
Apple waxay u soosaartaa Podcasts cusub kuwa yaryar ee qoyska ka tirsan. Waxay noqon doontaa barnaamij ballaaran oo laga heli karo arjiga Podcasts.
Tijaabada Bilaashka ah ee Amazon Audible mudo 3 Bilood ah
Haddii aad dooneysay inaad tijaabiso barnaamijka buugaagta maqalka ee Amazon in muddo ah, iyada oo la adeegsanayo dhiirrigelintaan, wax cudurdaar ah ma lihid.
Podcast toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka ugu muhiimsan ee ka dhaca adduunka tiknoolajiyadda, oo diiradda lagu saaray Apple.
Toddobaadkan waa waqtigii laga hadli lahaa wararka xanta ah ee ku saabsan iPhone 13 ee soo socda, batari qarsoodi ah, AirTags, iOS 14.5 iyo in ka badan.
Maanta waxaan ka jawaabeynaa su'aalaha dhagaystayaasheena, anaga oo xalinayna shakiga kana jawaabeyna codsiyadooda.
Podcast 12 × 17: macruufka 14.5 iyo rukumo
Waxaan ka hadlaynaa wararka ku saabsan iOS 14.5 ee kuu oggolaanaya inaad furto iPhone-kaaga adoo adeegsanaya maaskaro mahadsanid Apple Watch.
Waxaan falanqeynaa wararkii ugu dambeeyay iyo horumarada ka socda dunida tikniyoolajiyadda, gaar ahaan waxaan diiradda ku saareynaa Apple iyo wax soo saarkooda.
Mark Gurman wuxuu la soo noqdaa sharaftiisa, isagoo bilaabay dhowr bambooyin waxa na sugaya sannadka 2021 iyo 2022 ee adduunka Apple.
Toddobaadkan Podcast-ka waxaan ku lafagureynaa wararka la xiriira Apple xilliyada ciidaha Kirismaska
12 × 13 Podcast: Hareeraha gaariga Apple
Waxaan haynaa dareenkii ugu horreeyay ee AirPods Pro oo waxaan ka hadalnaa gaariga Apple iyo khilaafka FaceBook.
Podcast 12 × 12: labada weji ee Apple
Waxaan falanqeyneynaa bilawga cusub ee AirPods Max, samaacadaha dhegaha ee la heli karo oo aad u yar laakiin dhamaanteen waan rabnaa.
Podcast toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka tiknoolajiyada ee la xiriira Apple iyo tartanka, oo leh macluumaad iyo ra'yi.
Podcast 12 × 10: Mid ka mid ah nuuradda iyo midda ciidda
Waxaan ka hadalnay kala duwanaanshaha qiimaha ee alaabada Apple, kuwa ugu qaalisan uguna raqiisan shirkadda tufaaxa.
Podcast 12 × 09: Toddobaadkii Hits
Waxaan falanqeyneynaa warka toddobaadkan, waxoogaa la yaab leh oo loo dhan yahay oo lagu ammaanayo Apple-da cusub ee la sii daayo.
Podcasts laga heli karo Apple Podcast ayaa hadda lagu dhejin karaa bog kasta oo shabakad ah
Waad ku mahadsan tahay aaladda webka cusub ee Apple soo saartay, waxaan ku dhexgeli karnaa Apple Podcast bog kasta.
Podcast 12 × 08: Waxaan falanqeyneynaa dhacdada "Wax kale"
Apple waxay soo bandhigtay Mac-ga cusub oo ay ku shaqeynayaan, M1. Waxaan kuu sheegeynaa warka uu na tusay munaasibadiisa.
Warp Drive Teleport Racing! Ciyaarta waxaa laga heli doonaa dhawaan Apple Arcade. Ciyaar tartan mustaqbal mustaqbal
Podcast 12 × 07: Waxa aan ka rajeyneyno dhacdada Mac ee soo socota
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aan ka ogaanno dhacdada soo socota ee "Hal Wax Ka Badan" oo ay Apple qorsheyneyso 10-ka Nofeembar.
Maalin kasta - Waxyaabaha aan ka helin Apple
Maanta waa inaan ka hadalnaa dhammaan waxyaalahaas oo aanan ka helin Apple, kuwa aan tirtiri lahayn iyo kuwa aan jeclaan lahayn inaan wax ka beddelno.
Podcast 12 × 05: Waxaan falanqeyneynaa dib u eegista ugu horreysa ee iPhone 12 iyo iPad Air 4
Ka dib dib u eegista ugu horreysa ee iPhone 12 iyo 12 Pro cusub iyo iPad Air cusub, waxaan ku falanqeynay kuwa ugu fiican faa iidooyinka iyo qasaaraha.
Podcast 12 × 04: Falanqaynta soo bandhigida iPhone 12
Qeybta toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa warka ay Apple noogu soo bandhigtay dhacdada ayeR: iPhone 12, HomePod Mini, MagSafe.
Podcast 12 × 03: IPhone 12 waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 13
Maxaan ka arki karnaa munaasabadda Oktoobar 13? IPhone-ka cusub, AirTags, HomePod mini, Mac ARM cusub ...
Podcast 12 × 02: Sii deynta macruufka 14 iyo Apple Watch Series 6
Waxaan ka hadleynaa iOS 14 iyo Apple Watch Series 6, astaamaheeda ugu muhiimsan iyo wararka kale ee usbuuca.
Podcast 12 × 01: Falanqaynta Dhacdooyinka Apple
Waxaan falanqeyneynaa dhacdada Apple ee ay na tustay Apple Watch cusub, iPad iyo adeegyo kale sida Fitness +.
Podcast 11 × 49: Waxaan leenahay dhacdo Sebtember 15
Podcast 11 × 48: Sebtember iyo Oktoobar way wadaagaan
Ma na sii deyn doontaa Sebtember? Iyo soo bandhigida khadka tooska ah ee Oktoobar? Goormaan arki doonnaa Apple Watch? Iyo iPad-ka?
Podcast 11 × 47: iPhone 12, Epic iyo waxyaabo kaloo badan
Podcast 11 × 46: Waxaan aadeynaa fasax
Waxaan aadeynaa fasax laakiin maahan inaan marka hore faallo ka bixinno wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple: iPhone 12, Apple Watch 6 iyo ciyaaraha geeyo.
Podcast 11 × 45: Maaskarada iyo Aqoonsiga Wajiga
Laakiin waxaan u haynaa Face ID hadda inaan ku qaadno maaskaro meel kasta. Maxaa la gudboon Apple? Miyaan dib ugu laaban doonnaa Taabashada Aqoonsiga?
Maalin kasta - Sixirka AirPods iyo dhibaatadooda weyn
IOS 14 Apple wuxuu cusbooneysiiyaa sixirka AirPods howlo cusub laakiin wali waxay ilaalinayaan cilladooda ugu weyn: batteriga.
Spotify wuxuu bilaabayaa fiidiyowyo fiidiyow ah si uu ula tartamo YouTube
Fiidyowyada fiidiyowga ee 'Spotify' hadda si rasmi ah ayaa loo heli karaa, inkasta oo xilligan la joogo, aysan jirin wax Isbaanish ah, waa tallaabada ugu horreysa ee lagu hor istaago YouTube
Maalin walba - Waa la waayey Airports-ka Apple
Waa in ka badan laba sano tan iyo markii ay Apple qortay router-keeda AirPort. Ma jiraan warar xan ah oo ku saabsan alaabooyinka cusub ee ...
Podcast 11 × 44: Xeedho, baytariyada iyo fiilooyinka
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa batteriga iPhone-ka soo socda, haddii uu ku jiri doono xeedho iyo haddii kale, iyo fiilada lagu dari karo sanduuqa.
Podcast 11 × 43: Horumarinta Barnaamijyada loogu talagalay iOS 14
Toddobaadkan 'Podcast', waxaan kula hadalnay horumariyaha oo noo sheegaya sida ay u tahay horumarinta barnaamijyada IOS, iyo sidoo kale isbeddelada muhiimka ah ee Apple.
Maalin kasta - IPhone aan lahayn xeedho?
Waxaan ka hadleynaa suurtagalnimada in Apple uusan ku darin xeedho sanduuqa iPhone 12 ee soo socda, kaas oo abuuraya khilaaf aad u weyn.
Podcast 11 × 42: Khibrad Betas
Toddobaad ka dib tijaabinta Betas ee iOs, iPadOS, macOS iyo watchOS waxaan kuu sheegeynaa dareenkeena ku saabsan cusbooneysiinta soo socota ...
Waxaan ku lafagureynaa dhammaan wararka aan maanta ku aragnay Apple soo bandhigeeda iOS 14, macOS 11 Big Sur iyo barnaamijyo kale.
Maxaa ku cusub qalinka Apple
Muhiim WWDC 2020: maxaa ku cusub qalinka Apple
Waxaa jira wax ka yar hal usbuuc oo loogu talagalay WWDC 2020 inay dhacdo oo aan ku arki doonno iOS 14, watchOS 6, ...
Mac cusub oo wata processor-ka ARM, iMac cusub iyo wax kasta oo aan ka ogaanno macruufka 14-ka barnaamijkan 'Podcast' ee toddobaadkan, iPhone News
Maalin - HomeKit Secure Video ayaa wax walba beddelaya
Maanta waa inaan ka hadalnaa HomeKit Secure Video, oo ah shaqeyn cusub oo soo saareyaasha kamaradaha waxyar yar ...
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa WWDC-ka soo socda ee lala wadaagayo asxaabta 'MACiLustrated'. Maxaan arki karnaa, waxa aan jeclaan lahayn inaan aragno iyo wixii aanan arki doonin
Maalin kasta - Tooshka tooska ah iyo barnaamijka xisaabiyaha ee lacagtaada xada
Waxaan burburinay been abuurkii aan ku aragnay warbixinnada wararka ee ku saabsan halista toosh iyo Calculator codsi, si nasiib darro ah.
Waxaan ka wada hadalnay Jailbreak cusub oo loogu talagalay iOS 13.5 iyo wararka kale ee usbuuca ee la xiriira tikniyoolajiyadda iyo adduunka Apple.
Apple waxay dooneysaa inay ku dhiirrigeliso nuxurka asalka asalka ah barnaamijkeeda
Fikradda Apple ee ah inay xoojiso adeegyadeeda fiidiyowga ee qulqulka leh ayaa ah inay u sameyso waxyaabo asal u ah Apple Podcast oo gaari kara shaashadda yar
11 × 36 Podcast: Apple Glass, COVID-19 iyo In ka badan
Waxaan falanqeyneynaa dhammaan xanta iyo daadinta ku saabsan Apple Glass, iyo sidoo kale wararka cusbooneysiinta ee iOS 13.5 iyo barnaamijka ka dhanka ah COVID-19 ee Spain.
Maalin kasta - Waxaan go'aansaday MacBook Air Maxaa diidaya MacBook Pro?
Maanta Podcast Daily, wuxuu sharraxay sababta aan u doortay waxoogaa horumar ah oo loo yaqaan 'MacBook Air' oo ka sarreeya aasaaska 'MacBook Pro'.
App Store-ka Apple wuxuu hada taageeraa qaabka mugdiga ah
Waxay ku qaadatay in kabadan 8 bilood Apple inay xasuusato in dalabka Apple Store aan wali la cusbooneysiin qaabka mugdiga ah ee iOS 13
Waxaan falanqeyneynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan iPhone 12 ee soo socda, kaas oo ku dhowaad dhammaan qeexitaannadiisa laga sii daayay
Maalin kasta - Sidee loola xiriirayaa Barnaamijyada Raadinta ee loogu talagalay COVID-19 Shaqada
Sidee barnaamijyada loo adeegsadaa in lagula socdo xiriiryada ay suurtagal tahay inuu ku dhaco COVID-19 iyo su'aalahooda ku saabsan shaqada asturnaanta.
WWDC 2020 ayaa bilaabanaya Juun 22, Plus Waxaan Ka Hadleynaa 13-Inch MacBook Pro Cusub Oo Todobaadkan Soo Baxay Iyo Warar Kale
Waxay u muuqataa in sanado badan oo xan iyo warar la sheegay in la xaqiijinayo la bilaabayo Mac kii ugu horeeyay ...
Waxaan dib u eegnay sii deynta cusub ee Apple, iPhone-ka cusub iyo Keyboard-ka sixirka, iPhone raqiis ah iyo kumbuyuutar aad u qaali ah.
Podcast 11 × 31: Retro waxay ku jirtaa moodo
Waxaan falanqeyneynaa wararka usbuuca ee aan ku ogaanay tilmaamaha naqshadeynta ee iPhone 12 ee soo socda ...
Inta aan sugeyno imaatinka iPhone SE ama Apple ee sameecadaha dhegaha leh, waxaan falanqeyneynaa xanta ku saabsan alaabada soo socota iyo iOS 14.
Podcast toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka tiknoolajiyada ugu habboon ee Apple iyadoo had iyo jeer ah halyeeyada ugu weyn
Apple waxay cusbooneysiisay iPad Pro iyo MacBook Air usbuucan, waxaan dib u eegnay qalabkan cusub iyo cusbooneysiinta iOS 13.4
Filimaan kusaabsan Apple (1/4) [# StayAtHome]. Burcad badeedda Silicon Valley waa filimkii ugu horreeyay ee laga sameeyo taariikhda Apple iyo Microsoft.
Toddobaad aad u adag oo dhammaanteen ah, waxaan ku dadaalnaa sidii aan uga dhigi lahayn xabbadda mid loo dulqaadan karo iyadoo la falanqeynayo wararka ...
Dhammaan wixii ka digaya ee aan maalmahan helnay, waxaan falanqeyneynaa waxa ay u muuqato inay noqon doonaan sheekooyinka ugu waaweyn ee iOS 14, watchOS 7 iyo in ka badan.
Dib udhaca soo saarida aaladaha, baajinta dhacdooyinka tikniyoolajiyadda ... Coronavirus-ku wuxuu sii ahaanayaa xarunta wararka.
Maalin kasta - trackpad loogu talagalay iPad Pro
Haddii aan dhageysano xanta, Barnaamijku wuxuu bilaabi karaa kumbuyuutar cusub oo loogu talagalay iPad Pro soo socda kaas oo lagu dari lahaa ...
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa cashuurta Google, oo ah cashuur ay dhawr waddan isku dayeen inay ku soo rogaan tiknoolajiyad waaweyn iyaga oo aan ku guuleysan wax badan
Maalin kasta - Beddel barnaamijyada asalka ah ee iPhone
Apple waxay si dhakhso leh u oggolaan kartaa in la beddelo barnaamijyada loo qaabeeyey sida caadiga ah iPhone iyo iPad, si loo dhigo kuwa aan dooneyno
Maalmihii la soo dhaafay, waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan kororka cajiibka ah ee khayaanada loogu talagalay macOS, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay ...
Maalin kasta - Shaki ku saabsan mustaqbalka taleefannada isku laaban
Waxaan hadda aragnay taleefannada cusub ee isku laaban sanadkaan 2020, iyadoo dhibaatooyinka qaar la xalliyey laakiin weli shaki badan ayaa in la xalliyo
Podcast 11 × 22: Coronavirus wuxuu ku imanayaa Teknolojiyada
Coronavirus waa halyeeyga wargeysyada wararka, sheekaysiga dukaamada kafeega iyo shaqada, iyo ...
Maalin kasta - Dhamaan wararka ku jira macruufka 13.4
Apple waxay sii deysay macruufka 13.4 Beta 1 waxayna ku sameysaa astaamo badan oo cusub, qaar iyaga ka mid ah runtii waa layaab, sida inay gaarigaaga ku furaan iPhone
Podcast 11 × 21: Xanta iyo warar xan badan
Toddobaadkan waa inaan ka hadalnaa wararka xanta ah ee ka muuqda alaabada cusub ee aan arki karnay qeybtaan hore ee ...
11 × 20 Podcast: Sannad-guurada iPad, Da 'yar iyo Diiwaan Cusub
Podcast-ka toddobaadlaha ah ee ku saabsan Apple iyo teknolojiyadda guud ahaan oo aan uga hadalno wararka ugu muhiimsan maalmihii ugu dambeeyay, xanta, iwm.
Maalin kasta - 10 Sanno oo iPad ah
Toban sano kadib iPad-ku wali waa boqorka kiniiniyada. Waxaan ku falanqeyneynaa dariiqeeda bilowgeeda ilaa iyo sida ay maanta tahay.
Maalin kasta: Asturnaanta, sirta, iCloud ...
Asturnaanta, sirta, iCloud, iPhone, amniga ... waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba ugu sharaxno qaab fudud si aan u aragno inaan is cadeynayno.
Podcast 11 × 19: Taxanaha, TouchID iyo Asturnaanta
Waxaan ka hadlaynaa Apple TV +, oo ku saabsan taxanaha cusub ee soo socda, oo ku saabsan Disney + oo dhowaan imaan doona Spain, iyo arrimaha gaarka ah ee ay doonayaan inay naga qaataan.
Bandhigga Subaxnimadu waxay sii waddaa inay abaalmarinno siiso mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn, Jennifer Aniston ayaa ku guuleysatay abaalmarinta atariishada ugu wanaagsan
Maalin kasta: Qof kastaa ma jecla asturnaanta
Waxaan si aad ah uga walaacsanahay arrimaha gaarka ah, laakiin waxaa jira kuwa doonaya inay ku dhameeyaan xuquuqdaas qiima kasta oo ay leeyihiin, xitaa cabsi.
11 × 18 Podcast: Sheeko-gacmeed Saynis ah CES
Toddobaadkan waxaan eegeynaa wixii yar ee war ahaa ee ka soo baxay Apple waxaana diiradda saareynaa alaabada CES ee that
Maalin kasta - Yurub waxay ku qasbi kartaa iPhone inuu haysto USB-C
Yurub ayaa mar kale ka fiirsaneysa suurtagalnimada in Apple lagu qasbo inay isticmaasho USB-C iPhone-keeda, laakiin Cupertino way iska celinayaan
Maalin kasta - Tani waa sida aan ugu beddelay MacBookkeyga iPad Pro
Sannad ka hor ayaan ka booday MacBookkeyga oo aan u aaday iPad Pro, anigoo gebi ahaanba qashinka ka qaadaya laptop-ka caadiga ah anigoo u roon kaniini. Waxaan kuu sheegayaa gabagabada.
Podcast 11 × 17: Muxuu 2020 ina keenayaa?
Waxaan u falanqeyneynaa wararka Apple sida xanta ku saabsan iPhone-ka cusub ee SE 2 ama iPhone 9 oo aan arki karno horraanta 2020
Maalin kasta - Fusion Drive… Ilaa goorma?
Apple waxay ku adkeysaneysaa inay sii wado adeegsiga tikniyoolajiyad aan micno dambe u samaynaynin oo wixii ay ku guuleysato oo dhan ay tahay inay soo saarto cidhiidhi ku jira Mac-keeda.
Maalin kasta - otomaatiga guud ee guryaha? Waan arki doonaa
Toddobaadkan warka ayaa la daabacay in Apple, Amazon iyo Google, marka lagu daro isbahaysiga Zigbee, ay abuureen koox ka shaqeysa mideynta otomaatiga guriga.
Taxanaha Majaajilada Quest Quest: Raven's Diyaar, oo si rasmi ah loogu shaaciyey Apple TV + bisha Febraayo ee soo socota
Maalin kasta - Dib u soo koobida tobanka sano ee Apple
Sanadka 2019 wuu dhammaadaa wuxuuna ku egyahay toban sano oo Apple ay la kulantay caqabado cusub oo ay ku noqotay shirkad ujeeddooyin cusub leh.
Maalin kasta - iPhone aan lahayn hillaac ama USB-C
Xanta ugu dambeysa waxay ka hadlayaan iPhone iyada oo aan wax xiriir ah la sameynin 2021, laakiin maxay taasi ka dhigan tahay? Faa’iidooyin noocee ah ayuu go’aankaani keeni doonaa?
Podcast 11 × 16: Soo koobid 2019, nalalka iyo hooska Apple
Waxaan ku soo koobeynaa sanadka 2019-ka Apple, wixii wanaagsan iyo kuwa xun, wixii aan ugu jeclaan jirnay iyo waxa ugu yar, marka lagu daro ka hadalka mustaqbalkiisa ugu dhow.
Apple wuxuu ka mid yahay musharixiinta 2020 Dahabka Dahabka ee taxanaha "The Morning Show" iyadoo Jennifer Aniston sidoo kale loo magacaabay
Maalin kasta - LCD, OLED, miniLED iyo microLED bandhigyo
Waxaan ka hadleynaa shaashadda cusub ee miniLED iyo microLED ee ku imaan kara aaladaha Apple isla marka la gaaro sanadka soo socda ee 2020.
Maalin kasta - Maxaad ku sameyn kartaa NFC-ga iPhone-kaaga
Waxaan ka hadleynaa NFC ee iPhone-ka, teknoolojiyad noo ogolaaneysa inaan ku bixinno Apple Pay laakiin sidoo kale hadda waxay leedahay fursado badan oo badan
Podcast 11 × 15: Aaway Dhacdadii Apple?
Podcast oo aan uga faalooneyno waxa ka dhacay dhacdadii gaarka ahayd ee maanta ee 2-aad, dhacdo u muuqata inay liqday Dhulka.
Podcast - Toddobaadka Jimcaha Madow
Toddobaadkii dhaqdhaqaaqa yar ee ku wareegsanaa Apple iyo in aan fursadda uga faa'iideysan doonno inaan ka faallono waxyaabo kala duwan sida aan ula nimaadno….
Maalin kasta - nama dhageystaan, maxaa yeelay uma baahna
Miyaad u malaynaysaa in taleefankaaga casriga ahi ku dhageysanayo? Xaqiiqdu waxay tahay inay samayn karaan, laakiin faa'iido ma noqonayso, maxaa yeelay uma baahna, horayba way u ogyihiin wax kasta oo ay doonayaan
Maalin kasta - Maxay yihiin shabakadaha MESH sideese u shaqeeyaan?
Maanta waxaan ka hadleynaa shabakadaha MESH, tiknoolajiyadaas loogu talagalay WiFi-ga guriga oo inyar-yar u imanaya ...
Tan iyo Cupertinon waxay wax ka beddeleen oo ay ballaariyeen tirada shaqooyinka ay hadda siiso soo-saareyaasha Podcast, iyadoon lagu darin nidaam lacag-soo-saar.
Podcast 11 × 01: Waxaan bilaabeynaa xilli ciyaareedka cusub
Waxaan ku bilaabeynaa xilli ciyaareedka cusub ee loo yaqaan 'Actualidad iPhone Podcast' qayb aan ku soo koobeyno wax walba oo xagaagan ka dhacay Apple.
Apple hadda waxay noo oggolaaneysaa inaan ku ogaanno boodhadh cusub oo loo marayo qaybo cusub oo ka mid ah baaritaanka barnaamijka Apple Podcast.
Ka faa'iideyso qiimo dhimisyadan gaarka ah ee qalabka 'HomeKit', qalabka dhegaha la galiyo, iyo inbadan. Miyaad seegaysaa dalabyadan?
Waxaan dhammeynay xilli tobnaad ee Podcast-geenna ah oo aan ku falanqeynayno dhammaan barnaamijyada softiweerka ah ee Apple ay ku soo bandhigtay 2WWDC 2019,…
Toddobaadkan waxaan ku falanqeyneynaa dhammaan wararka ku saabsan iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 iyo tvOS 13 kadib soo bandhigida Apple.
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa wararka aan ku arki karno iOS 13, watchOS 6, tvOS 13 iyo macOS 10.15, marka lagu daro wararkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda.
Sidee u daawan kartaa fiinaalka Copa del Rey ee sannadkan taleefankaaga iPhone-ka. Waxaan ku tusaynaa ikhtiyaarka ugu fiican ee loogu talagalay
Podcast 10 × 31: Dhibaatada Huawei, MacBook Pros cusub iyo in ka badan
Waxaan falanqeyneynaa wararka usbuuca ee saameynaya Huawei, Google iyo dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya Donald Trum iyo Shiinaha, iyo sidoo kale warar kale
10 × 30 Podcast: U Diyaargarowga iOS 13 iyo iPhones-ka Cusub
IOS 13 iyo sida ay ula jaan qaadayaan aaladihii hore, naqshadaha cusub ee iPhone-ka oo aan arki doono bisha Sebtember iyo warar kale
Qeybtan toddobaadkan waxaan uga hadalnay isbeddelka Apple ee qaabka ganacsiga, dhibaatooyinka ay keeneen iibsashada dhijitaalka ah iyo warar kale
Podcast 10 × 28: Ka taxaddar inay na dhageysanayaan
Asturnaanta waxay noqoneysaa shaqada shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda isla xilligan marka ixtiraamkoodu u muuqdo mid aan waxba ka jirin.
Toddobaadkan waxaan falanqeyneynaa isbeddelada ay Apple noo diyaarisay ee iOS 13 iyo macOS 15, waxaadna moodaa inay diirada saarayaan iPad-ka
Podcast 10 × 26: Toddobaad isbeddel ah
Podcasr toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka ugu caansan adduunka ee teknolojiyadda, gaar ahaan Apple iyo wax soo saarkooda.
Podcast 10 × 25: Mid ka mid ah nuuradda iyo midda ciidda
Toddobaadka waxay qaadan doontaa waqti in la iloobo Apple, iyada oo mid ka mid ah baajiyihii ugu caansanaa ee taariikhda dhow gudaha ...
Podcast 10 24: Podcast +, Card, rArcade iyo TV +
Waxaan falanqeynay dhacdadii 25-kii Maarso ee Apple ku soo bandhigtay adeegyadeeda cusub News +, Card, Arcade iyo TV +. Ra'yi iyo macluumaad.
Podcast 10 × 23: Toddobaadka Fantastic ee Apple
Toddobaadka maalinlaha ah ee lagu sii daayo Apple, wax aan hore loo arag. Waxaan falanqeyneynaa alaabada cusub iyo kuwa soo socda.
Podcast 10 × 22: Waxaan falanqeyneynaa dhacdada xigta Maarso 25
Qeybtan toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa dhacdada dhici doonta 25-ka Maarso adeegyada cusub ee Apple
Podcast 10 × 21: Telefoonada isku laaban, Apple ayaa ah guuldaradiisa ugu weyn
Ka dib markii la bilaabay taleefannada isku laabma ee Samsung iyo Huawei, qaar badan ayaa leh Apple ayaa dib u dhacday mar kale, xitaa Wozniak
Waxaan falanqeyneynaa xanta usbuuca ee ku saabsan IPhone cusub ee 2019, iPads-yada cusub iyo adeegga fiidiyowga ee qulqulaya ee Apple qorsheyneyso inay soo bandhigto.
Podcast 10 × 19: Maarso 25 waxaan yeelan doonnaa Muhiim
Waxaan falanqeyneynaa wararka dhacay toddobaadkan dhexdiisa iyadoo si gaar ah isha loogu hayo taariikhaha suurtagalka ah ee Keynotes-ka soo socda iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin
Podcast 10 × 18: Betas, oo khalkhal gelinaya Facebook iyo Google, welina waanu ka maqannahay FaceTime
Toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa macruufka 13, alaabada cusub ee imaan doonta sannadkan iyo muranka u dhexeeya Apple, Facebook iyo Google
Podcast 10 × 17: FaceTime wuxuu siinayaa Apple waqti adag
Apple wuxuu ku bilaabmayaa 2019 cag qaldan, marka hore dib u eegis hoos u dhac ah oo ku yimid dakhligiisa hadana waa cilad amni oo daran oo leh FaceTime
10 × 16 Podcast: Batariyada, Casriyaynta iyo Inbadan
Daahfurka Kiis cusub oo Battery Smart ah oo loogu talagalay iPhone, dib u soo muuqashada iPhone SE iyo warar badan oo dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka toddobaadlaha ah.
Podcast 10 × 15: Ka hadalka iPhone XI
IPhone XI-da cusub ayaa durbaba bilaabay inuu noqdo halyeeyada wararka teknoolojiyadda iyadoo xanta ku saabsan qaabeynta iyo qaababka ay tahay.
Podcast 10 × 14: Waxaan Ka Hadleynaa Apocalypse Apple
Toddobaadkan 'Podcast' waxaan uga hadalnay hoos u dhaca Apple. Fikrad iyo falanqeyn waxa laga yaabo inay yihiin wararka sanadka ee tikniyoolajiyadda
Podcast 10 × 13: Soo koobid 2018
Waxaan falanqeyneynaa sanadka 2018 ee inagu dhow. Waxyaabaha cusub ee la bilaabay, dayactirka, waxa in badan naga yaabiyey iyo wixii aan weli naga dhicin.
Podcast 10 × 12: Saaxiibbada mise Cadawga?
Toddobaadkan waxaan ka hadalnay cilaaqaadka duufaanka ee u dhexeeya shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada, hadda saaxiibo dhow iyo bilo yar gudahood cadow la neceb yahay.
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa doodda ah in kiniin uu noqon karo kombiyuutar, ama haddii laptop-ka aan waligiis iPad lagu beddeli karin.
Waxaan falanqeyneynaa xulashooyinka kala duwan ee kuwa caqliga ku hadla ay na siiyaan: Apple leh Siri, Amazon oo leh Alexa iyo Google oo leh Kaaliyaha Google.
Podcast oo aan ku falanqeyneyno wararkii ugu dambeeyay ee Apple iyo bilaabitaankiisa, toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa MacBook AIr, Mac Mini iyo iPad Pro.
10 × 08 Podcast: iPad-ka cusub Pro, MacBook Air iyo Mac mini
Waxaan falanqeyneynaa alaabada cusub ee Apple soo bandhigtay iyo Muhiimadeeda: iPad Pro cusub, cusub MacBook Air iyo Mac Mini cusub.
IPhone XR wuxuu horey u gaadhay kuwa ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay inay awoodaan inay falanqeeyaan waana terminal tilmaamaya iibiyaha ugu fiican Kirismaskan.
Xadgudbiyuhu wuxuu ku hagaajiyaa qaar ka mid ah cilladahiisa badan cusbooneysiintan
Kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macruufka, codsiga A3player wuxuu xakameynayaa xayeysiis shaashad buuxda ah oo loogu talagalay dadka isticmaala caymiska.
Wikiloc waa codsi bixiya marinno lagu raaxeysto dabeecadda waana mid ku habboon in laguu raaco Camino de Santiago
Waxaan kuu sheegeynaa dareenka ugu horreeya toddobaad kadib usbuucii iyadoo la adeegsanayo betaskii ay Apple kusoo bandhigtay muxaadaradii ugu dambeysay ee furitaanka WWDC 2018
9 × 33 Podcast: Cusbooneysiinta Pre-WWDC 2018
In ka yar hal usbuuc ka hor shirkii horumarinta ayaa yimid WWDC 2018 kaas oo ...
Podcast 9 × 30: Apple "guuldaradiisa"
Bilo kadib markuu kahadlaayay iibka liita ee iPhone X, Apple waxay qofwalba udareysaa aamusnaanta tirooyinka dakhliga. Laakiin kani ma dhammaan oo mar dhow ayaa isla wararkii isla ilo isku mid ah soo noqon doonaan.
Podcast 9 × 29: Ma waxaad ka timid Fortnite ama PUBG?
Labada kulan ee xilligan waxay u adeegaan inay muujiyaan sida dhufto ee moobiilku u yeelan karaan meel caan ka ah adduunka ciyaaraha fiidiyowga.
Podcast 9 × 28: Fashilka Apple
Ma jiro wax soo saar Apple ah iyada oo aan la helin guul darrooyin. Taariikhdu way iscelcelisaa marar badan, xitaa haddii mar dambe si kale loo caddeeyo, oo HomePod kuma kala duwanaan karin. Tani iyo warar kale oo ku saabsan podcast-keena.
Waxaad hadda ka soo dejisan kartaa filimkii ugu dambeeyay ee Star Wars iTunes-ka. Sidoo kale waxaad horay u dalban kartaa Ready Player One, filimki ugu dambeeyay ee Steven Spielberg.
Podcast ast 9 × 27: Inta udhaxeysa iPad iyo processor-ku ciyaarta ayaa socota
IPad-ka cusub ee 2018-ka, isbeddelka hawl-wadeennada laga soo bilaabo 2020 iyo wararka kale ee usbuuca ayaa lagu soo qaatay qaybtan cusub ee toddobaadleena toddobaadlaha ah.
Podcast 9 × 26: Dhamaadka waxaan leenahay dhacdo bisha Maarso
Ka dib toddobaadyo badan oo sugitaan ah iyo markii ay u muuqatay wax aan macquul ahayn in Apple ay ku dhawaaqdo dhacdooyinkeeda gu'ga, waxay dirtay ...
David Broncano, ma uusan dooneynin inuu seego fursad uu kaga tago hal-ku-dhigga xiisaha leh ee ku saabsan shilalka ka dhaca Apple Park, oo xitaa aan fiicnayn Steve Jobs.
9 × 25 Podcast: Apple wuxuu ku dhawaaqay WWDC 2018
Apple ayaa ku dhawaaqday dhacdadeeda bisha Juun, WWDC 2018 taas oo ay ku muujin doonto wararka iOS 12, macOS 10.14 iyo inta ka hartay shirkadaha.
Toddobaadkan waxaan la macaamileynaa wararka ugu habboon, sida suurtagalnimada in Apple ay soo saarto qalab cusub oo ka jaban ama ...
Podcast 9 × 23: Apple hadda waxay ku sharadaysaa dhagaha
Xanta ku saabsan AirPod-yada cusub iyo headphones-ka madaxa kale, iyo sidoo kale wararka kale ee usbuuca, ayaa lagu falanqeeyay podcast-keena.
Podcast 9 × 22: Android waxay ku faantaa "qaanso"
Podcast toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka ka imanaya adduunka tiknoolajiyada iyadoo fiiro gaar ah u leh Apple. Waxaan ka wada hadalnay "Notch" on Android, HomePod iyo warar kale oo muhiim ah usbuuca.
Podcast 9 × 21: HomePod haa, HomePod maya
Podcast-ka toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa HomePod, afhayeenka cusub ee Apple, iyo warar kale oo ku dhow shirkadda tufaaxa
9 × 20 Podcast: Apple miyuu ku qaldan yahay HomePod?
Kuwa ku dhaleeceynaya HomePod inuu aad u xiran yahay oo kaliya ay faa'iido u leeyihiin kuwa haysta alaabada Apple sax? Apple ma inay ufurtaa adeegyo kale oo dhinac saddexaad ah?
Podcast 9 × 19: Tufaaxu wuxuu garaacay biriiga ... markale
Toddobaadkan waxaan falanqeyneynaa wararka xanta ah ee sheegaya in Apple go'aansatay inay dib u dhigto warkiisa weyn ee iOS 12 illaa 2019 si diirada loo saaro waxqabadka.
Podcast 9 × 18: Sugitaanku wuu dhammaaday, HomePod waa halkan
Waxaan falanqeyneynaa wararka ka dhacay usbuuca dhexdiisa Apple iyo guud ahaan teknolojiyada, marka lagu daro ka jawaabida su'aalaha dhageystayaashayada.
Podcast 9 × 17; toban sano oo MacBook ah, warar iyo been
Sannad-guurada XNUMX-aad ee MacBook Air ayaa calaamadeyn u ah bilowga barnaamijkeenna, iyo sidoo kale wararka kale ee toddobaadkan iyo xoogaa been ah oo la daabacay.
Podcast 9 × 16: 2017 iyo 2018, hore iyo mustaqbalka Apple
Qeybteenii ugu horeysay ee sanadka oo aan ku eegeyno sida 2017 ay ugu qabatay Apple, iyo sidoo kale saadaasheena iyo rabitaankeena 2018.
Qayb cusub oo ka mid ah wargeyskeena toddobaadlaha ah ee aan ku wareysanno hal-abuurayaasha dhagaha Dotts Vantablack iyo falanqaynta wararka kale.
9 × 14 Podcast: iMac Pro Waa Halkan
Waxaan falanqeyneynaa wararka usbuucii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan bilaabista iMac Pro iyo iibsashada Shazam ee Apple
Podcast toddobaadle ah oo ku saabsan Apple iyo teknolojiyadda guud ahaan oo aan uga doodno wararkii ugu dambeeyay, fikradaha ku saabsan codsiyada iyo inbadan.
Apple waxay gashay mid kamid ah ceebaha amniga ee ugu halista iyo caqliga xun ee xasuusta, taas oo ku qasabtay inay mar labaad cafis waydiisato dadka isticmaala.
Qeybta cusub ee barnaamijka 'Actualidad iPhone podcast' oo aan ku leenahay joogitaanka Macjosan oo sharxi doona wanaagga NAS
IPhone X wuxuu bilaabmayaa inuu ka soo muuqdo cinwaannada wararka ee leh dhibaatooyinka shaashadda kala duwan, kuwa ku hadla, iwm. Dhibaatooyinka dhabta ah ama buunbuunin?
IPhone iyo Apple Watch waxay sii wadaan inay ku sii xoogaystaan ​​dhalinyarada
Daabacaadda cusub ee majaladda Piper Jaffray ayaa ina tusaysa natiijooyinka ka soo baxa sahannada dhallinyarada ee iPhone iyo Apple Watch.
U nuglaanta WhatsApp waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto qofka aad ku hadlayso
Jilicsanaan cusub oo laga helay WhatsApp ayaa lagu daray taas oo noo oggolaaneysa inaan basaasno wadahadallada aan ku leenahay qalabkeenna.
Samsung ayaa "dhaafi lahayd" Apple oo leh shaashada sawirka shaashadda
Samsung waxay ku qalabayn doontaa mid ka mid ah qalabkeeda cusub shaashad shaashad ka hooseysa shaashadda, laakiin waa maxay sababta dhabta ah ee "horumarkan"?
Podcast 9 × 05: Dhibaataynta
Qeyb cusub oo ka mid ah Podcast-ka toddobaadlaha ah ee loo yaqaan 'Actualidad iPhone' oo aan uga hadlayno cusbooneysiinta iOS 11 iyo wararka kale ee usbuuca